Barbados: Mpanao gazety voasambotra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Desambra 2008 17:47 GMT
Misaritaka ny tontolon'ny fitorahana blaogy Barbadiana tao aorian'ny fisamborana mpanao gazety malaza anankiroa – fihetsika izay nadikan'ny mpitoraka blaogy ho fanelingelenana ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety.
Ilay blaogy fanta-daza sy be mpanaraka Barbados Free Press dia milaza fa io fisamborana io dia valifaty tamin'ny “fitaterana momba ny manam-pahefana iray izay voampanga tamina fivarotana zava-mahadomelina” ary nampatsiahy ny mpamaky fa efa nisy tranga roa hafa koa “izay nanaovan'ny manam-pahefana herisetra tamin'ny mpanao gazety sy nanimbany ny raki-tsoratra, sary ary horonan-tsarin'izy ireo.” Na dia manamarika aza izy fa “nampanantena ny hanao fikarohana sy fanadihadiana momba ity trangan-javatra ity indray ny préfet de police” dia efa mailomailo amin'ny zavatra mety hivoaka avy amin'io ny BFP :
Tsy misy mihitsy na fanadihadiana na fanazavana, na avy any amin'ny Dottin na avy amin'ny Police Royal an'i Barbados, satria ambonin'ny lalàna ny manam-pahefana any Barbados. Tsy misy ny fanaraha-mason'ny tsy miankina atao amin'ireo manam-pahefan'ny polisy ao Barbados. Tsy misy koa toerana tsy miankina hametrahana fitarainana, na masoivoho hanao fanadihadiana amin'izay hadisoana [bavure] nataon'ny polisy. Raha misy olona te-hitory manampahefana iray noho ny fihoaram-pefy, dia mbola zavatra sarotra sy mety tsy ho tanteraka izany.
Tao amina antso fangatahana ny hialàn'ny prefet de police, naverin'i Barbados Free Press navoaka mba ho famenon'ny hafatra voalohany nalefany ny antso nataon'i Amanda Lynch-Foster mpanao gazety ao Barbados izay toa antso mitaona hihetsika:
Mino aho fa mitovy ny zavatra tsapan'ny maro amintsika androany – rikoriko sy tsy filaminan-tsaina ateraky ny tsy fanajàna izay mahazo ny mpanao gazety. Fanintelony izao no nitrangan'ity tao anatin'ny herintaona sy tapanyteo ho eo ary tsy mahafa-po ahy ny vokatra azo. Tsy mitsahatra ny mamerimberina ny préfet fa hanao fanadihadiana izy – efa fandre foana izany taloha. Tamin'ny taona lasa teo, ny Minisitry ny Fitsaràna teo aloha dia niteny fa tsy manan-jo hiditra ny faritry ny toeram-pitsaboana isika. Misy mihitsy aza olona sasany miteny fa mendrika antsika izany. Toa miha-mitombo hatrany ny tsy fanajàna ny mpanao gazety, ary hita eny rehetra eny izany.
Ka inona àry izany no ataontsika manoloana izany?
Barbados Underground koa dia nandefa ny hafatr'i Lynch-Foster, miaraka amin'ireo sary antsoina hoe “fitavozavozan'ny manampahefana”.
Boyce Voice (izay blaogy miompana amin'ny fialamboly amin'ny ankapobeny), dia tohina ka naneho ny heviny manoloana ity trangan-javatra ity:
Amin'ny maha Barbadian ahy, menatra aho ary manahy amin'ny fihetsiky ny “police royale” momba ny fanagadràna sy ny sazy henjana hatao amin'ireo mpanao gazety Cherie Pitt sy Jimmy Gittens tamin'ny nanaovany ny asa maha mpanao gazety azy ireo omaly.
Rikoriko aho nijery ny gazety androany ary nahita sarina lehilahy manampahefana bokon'ozatra manosika ilay mpanao gazety vehivavy Cherie Pitt izay saika haka sary rangahy iray voampanga ho mpivarotra zava-mahadomelina.
Inona no hafatra tian'ny manampahefana halefa, izy ireo izay tokony hiaro ny vehivavy amin'ny herisetra any an-tokantrano?
Ny asan'ny manampahefana ao amin'ny police royale ve dia ny hiaro ny polisy voarohirohy ho mpanapariaka zava-mahadomelina?
Matahotra aho raha ny polisy no tokony hanao toetra mahatsiravina sy manala baraka toy izany ka hanana fahasahiana hitoroka an’I Jimmy sy Cherie ho mpanelingelina ny fitsarana. Ny polisy aza no tokony henjehina fa manohintohina ny asa fanaovana gazety sy nanao herisetra tamin'i Cherie Pitt.
Mahalotika ahy mafy mihitsy ny namaky ny fanambaràna sy ny porofo tsy mitombina nentin'ny kaomisera Darwin Dottin izay mampanantena fanadiadiana feno.
Ny fanontaniana dia hoe iza no mba hanara-maso ny Polisy?
Iny tranga iny dia mbola manome ohatra indray ny filàna fahefana mahefa ivelany afaka hanadihady sy mba hanana fahefana handray fepetra hanasazy ireo Polisy mitady hanararaotra ny fahefany.
Tohizany ihany amin'ny fampitahàna ny fihetsikin’ny Polisy amin’ny “taktika Gestapo”:
Voaporofo fa matetika izay karazana jadona rehetra tiana hatao amin’ny fiaraha-monina dia manomboka amin’ny fandemen-tsaina sy ny fanampenam-bava ny fampahalalam-baovao, ary fotoana sisa no andrasana dia tonga any aminao izany.
Ary ao anatina hafatra izay manome rohy mitondra amin’ny fanehoan-kevitr'ireo mpitoraka blaogy maro, The Bajan Dream Project dia manome ny heviny tsotsotra:
Raisiko toy ny fahatsoran’ny zaza ity: ny Polisy izay niniana ‘fa hiasa sy hiaro ny vahoaka‘ no hiatrika ny mpitsara nohon’ny fanànana sy fanondranana rongony mahery vaika, raha ny mpanao gazety kosa dia tonga haka sary ho an’ny fanaovan-gazety an-tsoratra. Tsotra? Tsy aty Barbados izany. Satria, aty Barbados, ’ity toerana fakana aina anivon'ny tontolo misavoritaka ity’, mpanao gazety roa no miandry ny fitsarana azy taorian’ny fisamborana tamin'kery azy ireo raha teo am-panaovana ny asany izy ireo.Ny fahalalahàn’ny asa fanaovan-gazety, raha ny tokony ho izy, dia tsy voatery hanafosafo [hanarontsarona] ny polisy tratry ny fahalovana. Tongasoa eto Barbados, demokrasia arahina fepetra fampitandemana.